Nezvedu - Shijiazhuang hongmeida Trading Co, Ltd.
Shijiazhuang hongmeida Trading Co, Ltd inogadzira magurovhosi yakasimbiswa ne ISO9000, ISO14001 uye ISO18001. Kambani yedu yakavambwa muna 2000. Mushure memakore makumi maviri ekuenderera mberi kwekuvandudza, isu tava chigadzirwa cheguruva rakakura kuchamhembe kweChina. Parizvino, fekitari yedu ine vashandi vanopfuura mazana masere uye vanopfuura chiuru chiuru chemishini dzakasiyana siyana. Iyo kambani ine bhizinesi department, chigadzirwa chekusimbisa chigadzirwa, tekinoroji yekutsvagisa uye budiriro budiriro, zvekutenga zvinhu, nezvimwewo fekitori yedu inogadzira magurovhosi ekotoni, magurovhosi ekuchengetedza, magurovhosi e polyester uye mamwe magurovhosi ekusona.
Wedu bhizinesi uzivi "mutengi kutanga, wakanaka-anotungamira", kupa vatengi zvigadzirwa zvinogutsa uye zvemhando masevhisi ndicho chinangwa chedu chisingagumi.
Tinogona kubatsira kuita bhizinesi rako rive nani
Mhando yakanaka yegurovhosi zvinhu: 100% yakareba-yakagadzika machira kubva kuXinjiang, polyester, machira akasanganisa polyester, machira ane spandex, polyester ine spandex, satin ect.
Maitiro akasiyana-siyana egirovhosi: tine anopfuura makumi matanhatu akasiyana egirovhosi masitokisi ane machira egurovhosi, magurovhosi eGloves, magurovhosi eMuchadenga, sekunge aine dhizaina kushongedzwa, kaviri mutsara pane cuff, refu ruoko, chokwadi grip, Deluxe Sure grip gloves Velcro, Economy ndoge uye chiuno, zvigunwe zvisina magurovhosi ect.
Mutengo unokwikwidza: Isu takawana kuchamhembe kweChina, kumaruwa, saka mutengo wevashandi wakadzikira kupfuura zasi kweChina. Isu tiri fekitori, ASI iyo kambani yekutengesa, kubva fekitari zvakananga. Zvese zvatinoita, kudzikisa mutengo wako wekutenga, uye kusimbisa iwe kukwikwidzana kwemusika musika. Kutenga zvakananga kubva kuHMD Glove fekitori ichachengetedza nguva yako uye mutengo.
Unhu hwakasimbiswa kubva pazvinhu zvakasviba kusvika kumagirovhosi yakapera: HONGMEIDA Glove fekitori ndeye ISO9001 Hombe Yakabvumirwa gorovhi kugadzira, isu totevera ISO9001 yemhando yekudzora system.
Kune vanopfuura 800 vashandi fekitori yedu, uye anodarika chiuru nemishini, iyo nguva yekutumira yakavimbiswa.
Isu tinopa mushure mekutengesa sevhisi, kana iwe uine chero mibvunzo kana dambudziko mushure mekugamuchira magurovhosi, iwe unogona kusangana nesu, isu tichakupindura uye tipe mhinduro mukati maawa gumi nemaviri.
Yedu yekambani bhizinesi zano ndeye "Hutanga Kutanga, Mutengi Chekutanga", tinozvipira kuti uve wako akavimbika mumwe wako muChina.
1. Wongorora zvinhu zvese zvekuraira, tarisa uremu hwemucheka, chimiro chejira, kukurumidza kwemavara
2. Gadzira sampuro yekubvumidza kwako usati wagadzirwa masheya
3. Kutanga kuongorora kana iron
4. Chechipiri chekuongorora vaviri vaviri pamberi pekiti, tarisa magurovhosi ega ega aripo.
5. Chechitatu kuongororwa neQC timu yedu, sarudza kubva papedhi pakeji neyakaenderana maererano neAQL2.5
6. Chechina kuongororwa nekutengesa sevhisi, sarudza kubva kune yakapera pakeji neyakagadzirirwa maererano neAQL2.5
7. Chechishanu kuongororwa nemutengi kana wechitatu wega: tumira iyo yekutumira sampula kune vatengi kuti vatenderwa isati yaendeswa
Kunyatsoshanda: Kushanda, Nyukireya Industrial Industrial, Magetsi maindasitiri, Chengetedza unodziya, Kukwidza Bhendi, Mabiko, Cotillion, Chechi, Doorman, Eczema, Chikafu Chekudyira, Chikamu, Funeral, Hand bell Choirs, Hospitality, Mauto, Parade, Santa Claus, Unform, Usher, yakanaka kune lotions uye eczema matambudziko.
Vana White Cotton Magurovhosi, White Cotton Glove, Cotton Magurovhosi, White Cotton Grip Magurovhosi, Kurema Cotton Glove, Cotton Glove,